Però: Fitantarana antserasera momba ny horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Però: Fitantarana antserasera momba ny horohorontany
Voadika ny 28 Desambra 2018 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Português, 繁體中文, 简体中文, Español, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Aogositra 2007)
Sarina arabe tresaka nalain'i Alberto Arévalo ary nampiasaina araka ny lisansa Creative Commons.
Nahatratra 337 ankehitriny ny isan'ireo namoy ny ainy tamin'ny horohorontany tany Ica, any Però. Ny isan'ireo naratra kosa dia 827. Mbola tsy nivoaka tamin'ny gazety ao Lima, El Comercio na RPP izany tarehimarika izany, tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity. Na dia izany aza, noho ny fanampian'ny bilaogy World Wide Help, voamarina ny tarehimarika. Nahazo tatitra anatiny avy amin'ny Indeci sy UNDAC / OCHA (sampan'ny Firenena Mikambana) izy ireo. Nilaza ny tatitra voalohany avy amin'ny WWH hoe, “Horohorontany tany Però: Vaovao farany – 37 maty, 300 naratra“.
Nitatitra ny Los Angeles Times fa 330 no namoy ny ainy raha namely an'i Però ny horohorontany maridrefy 7,9.
A magnitude 7.9 earthquake shook southern Peru on Wednesday, killing at least 330 people and injuring more than 1,000 others in the cities of Ica and Pisco and sparking tsunami warnings for the Pacific coast of South America and the distant Hawaiian Islands
Horohorontany amin'ny maridrefy 7,9 no nihovitrovitra tany amin'ny faritra atsimon'i Però tamin'ny alarobia, namono olona 330 farafahakeliny ary nandratra olona maherin'ny 1000 tao an-tanànan'i Ica sy Pisco ary niteraka fampitandremana tsunami ho an'ny morontsirak'i Pasifika any Amerika Atsimo sy ireo Nosy Hawaii lavitra.
Efa manana lahatsoratra momba ny zava-nitranga Horohorontany 2007 tany Però ny Wikipedia, ary koa ny WikiNews, izay ahitana vaovao momba ny horohorontany: Horohorontany maro no namely an'i Però; Navoaka ny fampitandremana tsunami.
Nitatitra izao vaovao izao ny tranonkala Now Public: Horohorontany maridrefy 7,9: Lima, Però, izay fandikanteny avy amin'ny bilaogin'ny gazety El Comercio misy ny tantaran'ireo nanatri-maso ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra. Ny gazety La República kosa namoaka vaovao manokana an-tserasera izay fanangonam-baovao momba ny horohorontany.
Nandray anjara lehibe tamin'ny fanomezam-baovao momba ny antsipiriany sy ny traikefa samihafa momba ny zava-nitranga ny bilaogy.
Mitantara ny zavatra niainany tamin'ny fotoana nitrangan'ny horohorontany ny sasany. Estalla Mi Alma [ES] mandefa ny sasany tamin'ny lahatsary izay nalainy tamin'ny korontan'ny fifamoivoizana nateraky ny horohorontany. Somary sahiran-tsaina i Niña Goya [ES]:
Estaba con un amigo tomando frapuccino en Starbucks, de pronto empezo a temblar todo, pense que el local se caía, todos salieron corriendo, olvide mi cartera, deje mi postre a la mitad, los postes se tambaleaban, se fue la luz y regreso al toque, todo se mecía, todo se volvió un caos (es que todos chaparon sus cañas, no saben q es mejor no manejar cuando pasa algo asi!!!!!!!!!), empezo a temblarme las rodillas y las manos, por un momento quise llorar (es que solo pensaba en mis bebes)….que tal susto el que pasó medio Peru esta noche.
Niaraka tamin'ny namana nisotrosotro frapuccino tao amin'ny Starbucks aho, raha nanomboka nihozongozona ny zava-drehetra. Nihevitra aho fa hianjera eo amboninay ny fivarotana, ary nandositra ny sisa rehetra. Hadinoko ny kitapoko, navelako teo ny tsindri-sakafoko ambiny, nihovotrovotra ny faritra, ary maty ny jiro. Niverina izany fotoana fohy taoriana, nikorontana ny zava-drehetra (natahotra ny rehetra ary tsy mahafantatra raha mety na tsia ny mitondra fiara rehefa mitranga ny toe-javatra tahaka izao :)). Nanomboka nihovotrovotra ny lohaliko sy ny tanako, ary saika hitomany aho (rehefa nieritreritra ny zanako) … natahotra mafy ny antsasak'i Però tamin'io alina io.
MiGeo [ES] dia bilaogy nosoratan'i Miguel A. Vera León, mpianatra jeolojia ao Lima. Nampitandrina ny mpamakiny izy mba ho malina amin'ny fampitandremana amin'ny aterineto.
Manoro hevitra aho mba hitandremanao amin'ireo fampitandremana tonga amin'ny mailaka na SMS milaza fa hitranga ny hovitrovitra mitovy maridrefy amin'ny horohorontany. Diso izany. Marina fa mety hitranga ny hovitrovitra aorian'ny horohorontany, saingy tsy dia fahita firy ny hoe mitovy maridrefy amin'ny horohorontany tany am-boalohany. Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa raha sarotra ny maminavina ny hisian'ny horohorontany, dia miezaka manaitra ny vahoaka tsy amin'ny antony ny olona mamoaka vaovao tahaka izany.
Ankoatra izany, El Blog de Morsa [ES] manome vaovao mikasika ny fomba hanampiana ireo olona tena voakasika ao an-tanànan'i Ica amin'ny alalan'ny fanomezana tranonkala, nomeraon-telefaonina ary adiresy mailaka ho an'ireo liana. Pospost [ES] manoratra ny faharavana ao an-tanànan'i Pisco, ary ahitana horonantsary avy amin'ny fitantaran'ny fahitalavitra. Ankoatra izany, X-Blog [ES] manoratra ny fihetsiky ny filoha Alan Garcia sy ny fanehoan-keviny mikasika ny fahasimban'ny rafitra telefaonina..
Ahitana sary ihany koa ao amin'ny Flickr amin'ny kaontin'i Alberto Arevalo sy Christian Vinces. Azo jerena ao amin'ny Daily Motion sy YouTube ireo horonantsary avy amin'ny fitantaran'ny fahitalavitra. Na dia izany aza, mampiseho ireo olona natahotra nandositra niala ny trano fivarotana ny lahatsary nalain'ny jesus862 ary manamafy fa raha ny marina, horohorontany izany.
Ho fampahalalana bebe kokoa ny horohorontany Peroviana, tsidiho ny Globalizado sy ny lahatsoratra “Horohorontany Tao Però: 337 Maty ary 827 Naratra.”
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity koa i Eduardo Avila.
3 herinandro izayShina